अख्तियार प्रमुखका सहयोगीलाई किन भेटे अर्यालले ? – Etajakhabar
अख्तियार प्रमुखका सहयोगीलाई किन भेटे अर्यालले ?
काठमाडौं । भ्रष्टाचार आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा खेपिरहेका नेपाल प्रहरीका पूर्व महानिरीक्षक (आईजीपी) उपेन्द्रकान्त अर्यालले प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेतका प्रेस संयोजकलाई भेटेर सेटिङ मिलाएको खुलासा भएको छ ।
अख्तियार स्रोतका अनुसार पुस २४ गते दिउसो अर्यालले प्रेस संयोजक भवानी सुवेदीसँग नक्सालको एक रेष्टुरेन्टमा गोप्य भेटवार्ता गरेका हुन् । यूनाइटेड पोष्ट साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।
निलम्वित पूर्व प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की र भारतिय राजदूतावाससँग नजिक रहेका सुवेदी अख्तियारमा ‘पावरफूल’ कर्मचारीका रुपमा चिनिन्छन् ।
स्रोतका अनुसार आफ्नो मुद्दा मिलाईदिएको खण्डमा आकर्षक उपहार दिने आश्वसन दिएर अर्यालले सुवेदीलाई प्रभावमा पारेका छन् ।
फागुनको पहिलो साता अख्तियार प्रमुख बस्नेतको पदावधि सकिने भएपछि रिक्त रहने आयुक्त पदमा जान अर्यालले आफ्नो मुद्दा मिलाउन खोजेका हुन् ।
पछिल्लो समय अख्तियारकै आयुक्त नवीन घिमिरे आफूमाथि पूर्वाग्राहि रुपमा लागि परेको भन्दै अर्यालले घिमिरे विरुद्धसमेत विभिन्न नेताहरुकहाँ लविङ गरिरहेका छन् ।
अर्यालले हुन्डी कारोबारी पवन सरीयाको समूहसँग मिलेर अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको उजुरीमाथि पनि अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
अर्यालले सिन्धुलीको दुधौलीदेखि भक्तपुरको सूर्यविनायकमा आफन्तको नाममा भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको रकमले सयौं रोपनी जग्गा खरिद गरेको अनुसन्धानका क्रममा खुलिसकेको छ ।
अर्यालले सम्पत्ति विवरणमा पुख्र्यौली घर सिराहाको आँप बिक्री गरी आर्जित सम्पत्ति भनेर उल्लेख गरे पनि त्यसमा कुनै मेल नखाएको खुलेको छ ।
अख्तियारका निलम्वित पूर्व प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको निर्देशनमा कार्कीका सम्धी रोहीणी थपलियालाई प्रहरीको सामान खरिदको टेण्डर दिंदा कमिसन खाएको विषयमा पनि अर्यालमाथि अनुसन्धान भइरहेको स्रोतले बतायो ।
प्रहरीको लत्ता कपडा र रासन खरिदमा समेत ठेकेदारबाट अर्यालले एक पूर्व एआईजी मार्फत करोडौं कमिसन बुझेको पनि अनुसन्धानका क्रममा खुलेको छ ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, पौष २७, २०७४ समय: ७:३५:२२